यति सुन्दर छिन गायिका अन्जु पन्तकी छोरी, हेरौं तस्विरहरु « Etajakhabar
नेपालको चर्चित गायिका एवं सुमधुर स्वरको धनि अञ्जु पन्तको सुन्दरताको समाचारहरु बारम्बार आउने गरेको छ । नेपाली संगित क्षेत्रमा हिट गित दिन सफल उनै पन्तको छोरी भने मिडियामा खासै देखिन्नन् । मनोज शिवाकोटिसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकि अन्जुको परितोसिका एकमात्र छोरी हुन् ।
शिवाकोटिसँग डिभोर्स भएपनि परिशोतिका भने आमासँगै बस्छिन् । उमेर सानै भएपनि परितोसिका शारिरीर बनावटमा आमा बराबर छिन् । एक अर्का कपडा समेत साटेर लगाउन थालेका छन् । अञ्जु भन्दा पनि बोल्ड लुक्स उनमा आइसकेको छ । अञ्जुको छोरीलाई नायिका बनाउने योजना छ । यसैले अहिले देखि नै अभिनय, नृत्य सिकाईरहेकी छिन् । उनीहरु साथी जस्तै छन् ।
छोरी परितोसिका पनि मामुका लागि श्रीमान् भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसैले उनी सहजै भन्छिन् । मामुले बिबाह गरे कुनै फरक पर्दैन । सक्ने भए त मामुको लागि श्रीमान् मै खोजीदिन्थे । उनीहरु मज्जाले खुल्छन् । मनोज शिवाकोटिसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएपछि अञ्जुको विबाह गर्ने योजना भने खासै सुनिएको छैन ।
तेस्तै चर्चित गायिका अन्जु पन्तकी छोरी परितोषिका पन्तले अभिनयमा डेब्यू गरेकी छन् । ‘धेरै माया नदेऊ मलाई’ गीतको म्युजिक भिडियोमार्फत उनले अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन् । जसमा अभिनयमा परितोषिलाई मोडेल कुन्साङ बोम्जनले साथ दिएका छन् । पन्तकै स्वर तथा पहिलो पटक संगीत रहेको गीतमा सुरेश वाग्लेको शब्द रहेको छ । १० वर्ष अघि रचित प्रेमिल शब्दले भरिएको यो गीत निकै उत्कृष्ट भएकोले छोरीको डेब्यु यसबाट गराएको गायिका पन्तले बताइन् ।
हेरौ केहि तस्बिरहरु :
प्रेम गरेर विवाह गरेकी श्रीमतीले छोडेर गएपछि..
श्रीमानले घरमा आएर र बन्द गरे त्यसपछि……
दाइको न्याएको लागि अहिले सामाजिक संजालमा खुलेरै लाग्ने यी हुन् श्री एअरलाइन्सकी पाइलट दुर्गा
हास्दै रमाउदै घर जाने बेला म बाकसमा लास लिएर कसरी फर्किउ?
उसले निकै प्रयास गर्यो तर मैले दिएन ….
त्यसपछि मैले भनेँ ‘ब’ला’त्का’ र गर तर नमा र’
गर्भ कसरी बस्छ ?
भाग्यले बाँचेका केपी ओली, यसरि प्लान भएको थियो मा’र्ने योजना
आज पछाडि फर्केर हेर्दा ओलीजीसँग मेरो विवाह भएको ३२ वर्ष पुग्यो । उहाँ आफ्नो देश
दुवै हात खुट्टा नचल्ने बिक्रमसंग मनुले गरिन धुमधामसंग बिहे, बिहेकै दिन छोरी चाहियो भन्दा मनु लजाइन
पछिल्लो समय सबैको मन जितेको जोडी हो मनु र बिक्रमको उनीहरु अन्तरजातीय बिबाह गरेर मात्रै
करिनाले छोराको राजयोग लिएर जन्मिएको ज्योतिषको दाबी
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर दोस्रोपटक आमा बनेकी छन् । उनले आइतबार बिहान दोस्रो सन्तानको रुपमा
पुण्य गौतमले भात खाने जति सबै भाते भने पछी पत्रकार सँग पर्‍यो च,र्काच,र्कि (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय युट्युबमा केही व्यक्ति भाइ,रल भैरहेका छन् । त्यसरी भाइ,रल बन्नेहरुको सूचीमा ज्ञानेन्द्र शाही,
‘अडिसनमा बोलाएर मेरो मजाक उडाइन्थ्यो’ अनि त्यसपछी …
हिजो बिवाह गरेकी अन्जुको सार्वजनिक भयो श्रीमानसंगको यस्तो भिडियो
प्रकाश सपूतले पहिलो पटक दोहोरी गीतमा आफ्नी बहिनीलाई फकाउदै भने ‘धेरै न रिसाउ'(भिडियो)